A ga-eme ụbọchị Ural Ural n'August - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
A ga-eme ụbọchị Ural Ural n'August
в Ọkwa, News, Akụkọ mpaghara, Omume / Etu
Ihe ngosi mpaghara nke asatọ-forum "Ural Field Day-2022" ga-eme n'August 4 na mpaghara Ketovsky nke mpaghara Kurgan dị nso n'obodo nta ahụ. Sychev na KFH Nevzorova A.F., na-akọ ukara website nke ihe omume. N'afọ a, a ga-ahazi ihe omume ahụ na ọnọdụ mmepụta ihe n'ezie na ubi nke otu n'ime ugbo ndị na-eduga na mpaghara ahụ. Na isi ihe a ga-elekwasị anya ga-abụ ngosi ngosi ubi nke ígwè ọrụ ugbo na teknụzụ ndị a na-eji na mpaghara Ural, yana ihe ngosi na mkparịta ụka nke ihe ọhụrụ na sayensị ugbo, agribusiness, agricultural engineering, agro-tourism, wdg.
Ebe ngosi ngosi ihe ngosi nke ihe ngosi "Ural Field Day-2022":
- Akụrụngwa na teknụzụ maka iwebata n'ime mgbasa nke ala ugbo ejighi ya
- Mwube na nwughari nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ụlọ ọrụ agro-industrial
– Nhazi nke agro-nlegharị anya na ndabere nke ụlọ ọrụ ugbo dị ugbu a
- Ihe ọhụrụ na mmepụta ihe ọkụkụ: mkpụrụ osisi, ihe ọkụkụ, ngwaahịa nchebe osisi, fatịlaịza
- akụrụngwa na teknụzụ "Smart" maka mmepụta ugbo nke ọma
- Machinery na akụrụngwa maka nhazi, njem na nchekwa nke ọka
- Ngwọta ọgbara ọhụrụ maka azụmaahịa anụ ụlọ bara uru
Ihe ngosi pụrụ iche-forum "Ụbọchị Ural Ural" bụ nnukwu ihe omume nke ụlọ ọrụ agro-industrial, nke a na-eme kwa afọ na mpaghara Ural Federal District kemgbe 2015. Omenala nke ijide ihe ngosi ahụ na-akwado onye nnọchi anya Plenipotentiary nke Onye isi ala Russia na mpaghara Ural Federal, ndị isi nke ụlọ ọrụ ugbo na ndị na-emepụta ugbo sitere na mpaghara niile nke mpaghara ahụ na-ekere òkè n'ọrụ ahụ.
Weebụsaịtị gọọmentị nke ihe ngosi ahụ fieldday.ru
isi: Saịtị gọọmentị "Ural Field Day-2022"
Tags: Ụbọchị nke ubi UralMpaghara Kurgan
Na mpaghara Voronezh ga-eme mmemme "Potato Walk"